Istria any Kroasia: Fetiben'ny gourmet "Divay & Mandeha an-dranomasina" voalohany
Home » Vaovao momba ny divay » Istria any Kroasia: Fetiben'ny gourmet "Divay & Mandeha an-dranomasina" voalohany
Ny kalandrien'ireo hetsika amin'ny festival gourmet any Istria, Kroasia, dia manomboka amin'ny 23 septambra 2017, ary ny raharaha voalohany dia ny "Divay & Mandehandeha eny amoron-dranomasina."
Ny fararano dia vanim-potoana tsara indrindra natokana ho an'ny vokatra kulinarina sy divay. Nandritra io vanim-potoana io no nanaovan'ny perla 4 an'ny Adriatika - Umag, Cittanova, Brtonigla, ary Buje - any avaratrandrefan'i Istria ireo fetin'ny firenena sy fihetsiketsehana. Ity dia fotoana iray hanasana fotoana manokana hankafizana ireo tsiro tena izy ao amin'ny distrika, ary hahafantarana bebe kokoa momba ireo toerana ireo, na amin'ny ranomasina na any anaty.
Divay & Mandehandeha eny amoron-dranomasina
Fitsangatsanganana an-tongotra io amin'ny asabotsy 23 septambra 2017, namakivaky ireo panoramas tamin'ny fararano mahafinaritra izay misokatra eo anelanelan'ny tanimboaloboka sy ny tanin'oliva any Novigrad, vato iray any an-dranomasina.
Cittanova no handray ny andiany voalohany an'ny Wine & Walk by the Sea. Ny dikantenin'i Istria amin'ny fararano dia ny "Wine & Walk Fest", ary ity hetsika ity dia mampivondrona ireo zavamaniry sy panoramas amin'ny fararano, hetsika ara-batana ary traikefa amin'ny gastronomic miaraka amin'ireo vokatra Istriana mahazatra nozaraina amina kilaometatra misy divay sy sakafo 8 kilometatra.
Voalahatra ny maraina ny fiaingana, ary aorian'ny fisoratana anarana dia handray vera sy tapakila manandrana, ireo sarintany misy ny zotra ary torolàlana ireo mpandray anjara. Amin'izay fotoana izay dia manomboka amin'ny alàlan'ny rindrina taloha ao Cittanova ny diabe mandra-pahatongan'ny seranan'i Porporela, eo afovoan'ny afovoan-tanàna manan-tantara. Al Mandracchio, akaikin'ny fitoeran-divay eo an-toerana miaraka amin'ny fomban-drazana efa am-polony taona maro, no divay sy sakafo voalohany mampitombo ny angovo. Ny fitsangatsanganana dia mitohy miditra sy mivoaka amin'ireo làlana amoron-tsiraka, ary farany dia miditra amin'ny faritra avaratr'i Cittanova satria mitohy eo anelanelan'ny tanimboaloboka, ala oliva, ala ary ala voajanahary io. Eny an-dalana dia misy teboka divay sy sakafo hafa mahafaly ny lanilanin'ny atody nandrahoina sy divay tsara natolotr'ireo mpamokatra.
Ny zaridainan'i Vesuvius of Cittanova, ivon'ny afovoan-tanàna manan-tantara, dia manamarika ny faran'ny marathon amin'ny faramparan'ny tolakandro, rehefa afaka mankafy tsiro maimaimpoana ny vokatra fambolena, fahatsiarovana, sary mahafinaritra ary mozika ny mpandray anjara sy ny mpitsidika.
Ny Chestnuts sy Holatra
Ny volana oktobra dia mitondra ireo vokatra mahazatra Auttriste mahazatra: holatra sy chestnuts. Ny Alahady 15 Oktobra 2017 ao amin'ny ala Portole dia atao ny Chestnut Fair. Sakafo nentim-paharazana isan-karazany, ao anatin'izany ny chestnuts natsatsika, ny mofomamy, ary ny tantely, ary koa ireo mpandray hafa azo ankafizina. Tsy hadino koa ny divay vaovao, menaka oliva, paty mahazatra, tongolo lay, ary vokatra hafa eo an-toerana. Misy holatra be dia be ny 28 sy 29 Oktobra ao Verteneglio, mandritra ny Andro Mushroom izay hividianana holatra lehibe indrindra sy holatra «cauldron» tsara indrindra. Ny atrikasa sy seminera fanabeazana dia hifantoka amin'ny tontolon'ny holatra, ny fomba marina fakana azy, ny fomba hahafantarana azy ireo, ny karazana efa misy ary ny sandan'ny sakafo mahavelona azy. Fampisehoana karazana maro, hazakaza ary fanambarana farany ho an'izay mandresy no hamita ny hetsika. Ireo holatra aseho dia hiafara any an-dakozia ho fanomanana lovia lehibe ho hanandrana ny rehetra.
Ny hafatàny Mosato
Amin'ny faran'ny herinandro 10-12 Novambra, tonga ny fotoana ho an'i Momiano miaraka amin'i Martinje - andron'ny San Martino (Saint Martin no andro izay tsy maintsy mivadika divay ny voaloboka mahazatra). Tanàna kely manan-tantara any avaratr'i Buie, Momiano dia fantatra amin'ny maha-oasis ny moscato mamy (muscatel), teraka avy amin'ny fifangaroana tany sy toetrandro mahomby. Ireto no marika marika divay tena manan-danja novokarina tany Kroasia izay misy hatrany Malvasia ka hatrany Terrano dia hita eo akaiky eo. Ny vahoaka dia afaka miditra ao amin'ny Showcase of Muscat ao amin'ny cellars manandrana, fampirantiana iraisam-pirenena izay manangona mpamokatra an'ity amboara divay ity avy any Istria, Slovenia, ary Italia. Ny tsara indrindra dia medaly sy anaram-boninahitra "Mosattieri" (Musketeer) no tandindon'ny valiny sy ny ambaratonga tena tsara azo tamin'ny kanto miavaka amin'ny famokarana Muscat.
Truffle fotsy gourmet.
Fitsarana lava mandritra ny fararano
Ny vokatra fararano istriana dia misy ny truffle malaza, mpihetsiketsika manomboka ny 16 septambra hatramin'ny 19 novambra, mandritra ny faran'ny herinandro 10 any Levade. Ny Truffle Fair nentim-paharazana, karakarain'i Zigante Truffles isan-taona, dia fotoana tokana ahafahana mankafy ity tuber sarobidy ity. Ny vokatra iraisam-pirenena momba ny divay sy ny vokatra eo an-toerana dia miaraka amin'ny lovia, mamorona tsiro makirana sy sakafo matsiro indrindra nomanin'ireo mpahandro. Tuberfest dia natao tamin'ny 21-22 Oktobra, ny Istrian Truffle Days, karakarain'ny Kaominina sy ny Tourist Office of Portole.
Ny truffles dia singa malaza eo amin'ny tontolon'ny gastronomia. Eto no nahitany ny toeram-ponenany voajanahary indrindra amin'ny lohasahan'ny Ony Quieto. Ny truffle fotsy miaraka amin'ny tsirony manokana no mpiorina mba hanandrana amin'ny vokatra vita an-trano mahazatra ao an-toerana, ao anatin'izany ny ham, fromazy, tantely, grappa, menaka oliva, divay ary zava-manitra manokana. Mandritra ny roa andro dia afaka manatrika ny fikarakarana lovia truffle amin'ny alàlan'ny chef matihanina ny olona, ​​mandray anjara amin'ny fikarohana truffle miaraka amin'ireo manam-pahaizana manokana sy ny alika efa nampiofanina ary mandray anjara amin'ny lavanty truffle.
Ny loko Istria rehetra
Eto no hahitana kilometatra sy torapasika an'arivony an'arivony noforonin'ny ranomasina mangarahara, tanànan'ny mpanjono miloko, ary havoana manintona manan-karena amin'ny kolontsaina sy ny tantara. Ao Istria, any avaratra andrefana, ny toerana akaiky indrindra amin'ny sisintany Italiana, dia misy perla 4 an'ny Adriatika: Umag, Cittanova, Brtonigla, ary Buje. Izy io dia faritra manankarena fahagagana voajanahary, fomban-drazana mahandro sakafo izay mankafy ny vokatra eo an-toerana, ary fotodrafitrasa deluxe sy fampiononana miaraka amin'ireo ivon-toaka ara-pahasalamana manara-penitra, izay miantoka fialantsasatra feno kolontsaina, fahasalamana ary sakafo mahandro.
Dinidinika talen'ny fizahan-tany any St. Maarten Brison momba ny famindran-toerana ny fizahan-tany sy ny rivodoza Jose
Inona ilay fiaramanidina volafotsy eny amin'ny habakabaka? Ny Air Canada's Lockheed 10-A dia mitondra any amin'ny lanitra ho an'ny tsingerintaona faha-80